पूर्वमन्त्री रूप ज्योतिले यसरी दुरुपयोग गरेका रहेछन् मुख्यसचिवको पत्र
काठमाडौं – नेपालमा सरोगेसी धन्दा गैरकानुनी छ र यसले अझैसम्म पनि कानुनी मान्यता पाएको छैन । यद्यपि, २ पुस ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिई कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने बताएको थियो । तर, त्योभन्दा पहिले नै नेपालका निजामती सेवाका उच्च अधिकारी तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले लेखेको पत्रलाई दुरुपयोग गरेको भेटिएक..
टाइमिङका पक्का नेता नेपाल : एमालेमा यसरी चल्यो ‘माधव नेपाल टाइम’
शनिबार गोंगबुमा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र नुवाकोटले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले नेता म..
जसले बनाउँछ माटोबाट ‘भगवान’
भैरहवा–रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारमा क्षेत्रमा पर्ने मर्यादपर– ३ का रामकेवल राजभरक..
ओम र भेनस अस्पताल पनि गैरकानुनी धन्दामा
नेपालमा गैरकानुनी हुँदाहुँदै पनि भाडाका आमा अर्थात् सरोगेट मदरबाट बच्चा जन्माउने र ती बच्च..
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल पनि मुछियो
सरोगेसी सेवा नेपालमा गैरकानुनी छ । तर, नेपालमै करिब दुई वर्षदेखि यसलाई व्यवसाय बनाएर पैसा ..
संविधानको खुसीयालीमा दीप जलाउने कि आगो बाल्ने ?
काठमाडौं – भारतीय संस्थापनपक्ष यतिबेला नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा अलिबढी नै सक्रिय देखिन्छ । तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनदेखि थरुहट र जनजातीको मुद्धामा उसले नजिकबाट चासो दिईरहेको देखिन्छ । यो चासो नेपालको संविधान निर्माणको कोर्समा सकरात्मक ठान्ने पनि छन् र चासोले संविधान बनाउन सहयोग गर्दैन भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । काठमाडौंबाट ह..
पूर्वमन्त्रीदेखि एनआरएनका पूर्वअध्यक्षसम्मको कनेक्सन
गैरकानुनी भए पनि नेपालमा सरोगेसीको धन्दा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर यसअघिका दुई रिपोर्टमा धेरै कुरा बाहिर आएका छन् । सरोगेसीको अवैध धन्दामाथि अप्रेसन गर्दा त्यहाँ को–को संलग्न रहेछन् भन्ने सहजै पत्ता लाग्यो । तर, पत्ताउनै गाह्रो हुने अनुहार पनि यसमा मुछिएका छन् । सम्मानित व्यक्तित्व भनेर मानेकादेखि वरिष्ठ डाक्टर र व्यापारीहरूको..
गिरिजाको निर्णय उल्टाउन फिल्डमा उत्रिए कोइराला परिवारकै नेता
काठमाडौं– आफ्नै पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख भएका बेला नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ मा राखिएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटाउन नेपाली कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता लागिरहेका छन् । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्नका लागि कोइराला परिवारका सदस्य नै लागेका छ..
नक्कली आमा बनाउने खेलमा के–के हुँदो रहेछ ?
आमा शब्दले मातृत्व र सन्तान प्रेमलाई नै बढी जनाउँछ । नौ महिना गर्भमा बोकेर जन्माउने र जन्माएको त्यो अबोध बच्चालाई दूध चुसाउँदै हुर्काउने आमाभन्दा ठूलो दुनियाँमा अर्को केही हुँदैन । यसैले नारीको महिमा र गरिमा ठूलो छ । तर, केही नारीको बाध्यता भने भिन्न छ, जो भाडाका आमा बन्छन् । अर्काको बच्चा आफ्नो कोखमा हुर्काउँछन् […]
यसरी शुरु भयो नारी कोख भाडामा लिने धन्दाको अन्डरकभर रिपोर्टिङ
तपाईंसँग पैसा छ यदि भने यो सहरमा अब बच्चा जन्माउने कोख पनि भाडामा पाइने भएको छ । कुनै नारीको कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने सकिने भएको छ । यसबापत तिर्नुपर्ने पैसा भने महँगो छ । विषय सरोगेट मदर अर्थात् भाडाका आमाबारेको हो । र, नेपालमा लुकिछिपी यो पेसा वा धन्दाकै रुपमा विकास भइरहेको छ । […]
वर्षमा ६२ अर्बको रक्सी पिउँछन् नेपाली
काठमाडौं – नेपालमा एक वर्षमा ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रक्सी खपत हुने गरेको छ । देशमा उत्पादित दर्ताविनाको लोकल ठर्राबाहेक दर्तावाल कम्पनीबाट उत्पादित र विदेशबाट आयातीत गरी ६१ अर्ब ९२ करोड ३७ लाख १७ हजार बराबरको मदिरा नेपालमा खपत हुने गरेको हो । स्वदेशी र विदेशी विभिन्न कम्पनीको विभिन्न ब्राण्डको ५ करोड ७३ लाख ३९ […]
रकर्स म्याजिक : चर्चित ब्यान्डका लाइभ म्युजिक
काठमाडौं – राजधानीको ठमेल पर्यटकीय क्षेत्र हो । यहाँ पर्यटकका लागि क्याफे, रेस्टुरेन्ट, बारलगायत विभिन्न सेवा–सुविधा उपलब्ध छन् । ठमेलमा खासगरी पर्यटकका लागि क्याफे, रेस्टुरेन्ट, डिस्को थेक बढी छन् । त्यसमध्ये ठमेलको सातघुम्ती चाक्सीबारीमा ‘रकर्स म्याजिक क्याफे’ रहेको छ । रकर्स सञ्चालनमा आएको एक वर्ष भयो । रकर्सको स्पेसल ..
कसरी चलेको होला सुजाता कोइरालाको गुजारा ?
म विराटनगर कोइराला निवासमा जन्मेकी हुँ । हाम्रो परिवारले खेतीपाती गथ्र्यो । मलाई याद छ, हाम्री हजुरआमाले तरकारी लगाउनुहुन्थ्यो । गाईभैंसी, कुखुरा पाल्नुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवारको गुजाराको बाटो खेतीपाती नै थियो– बुवा, ठुल्बुवा जेल हुँदा पनि । हामीले घरमै उब्जेको तरकारी, गेडागुडी, चामल, तोरीको तेल खान्थ्यौँ । मेरो हज..
हरेक मसान्तमा किस्ता तिर्न बैंकमा हाजिर हुनुपर्दा बडो तनाव हुन्छ
म सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएको हुँ । बलेटक्सार–२ गुल्मीमा मेरो जन्म भएको हो, २८ भाद्र ०१९ मा । मेरी आमा पुण्यकला ०५३ मा र बुवा नारायणदत्त ०६१ मा खस्नुभयो । हामी तीन सन्तान हौँ । मभन्दा माथि दिदी र दाइ हुनुहुन्छ । दाइ लामो समय शिक्षण पेसा रहेर तीन–चार वर्षअघि मात्रै रिटायर्ड हुनुभएको छ । […]
कसरी चलेको होला गगन थापाको गुजारा ?
मेरो पुख्र्यौली थलो सोलुखुम्बु हो । मेरो बुवा सरकारी इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो । सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी पावरहाउसबाट बुवाले जागिर सुरु गर्नुभएको हो । म त्यहीबेला नै काठमाडौंमा जन्मेको हुँ । तर, मेरो प्रारम्भिक बाल्यकाल सिन्धुपाल्चोकमा बित्यो । हाम्रो काठमाडौं रातोपुलमा घर छ । मैले दुई कक्षादेखि काठमाडौंमा पढेको हुँ । त्यसपछि..
युवा संघको अध्यक्षको हैसियतमा सडकमा नाराजुलुस गर्दागर्दै अचानक मन्त्री पदको शपथ खाएर सिंहदरबार पुगेका महेश बस्नेत वर्तमान क्याबिनेटका निर्विवादित मन्त्री हुन् । सत्ता साझेदारहरूबीच बढ्दै गएको बेमेल, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा देखिँदै आएको असामान्य अवस्था लगायत विषयमा मन्त्री बस्नेतसँग रातोपाटीका लागि नेत्र पन्थी र राजेश भण्डारीले गर..
काठमाडौं– राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेसबाट भइरहेका निर्णय एकपक्षीय भएको निष्कर्षसहित एमाले स्थायी समितिको १० भदौको बैठकले राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्न भन्दै कार्यदल नै बनायो । विश्वविद्यालयलगायत निकायमा मुख्य राजनीतिक नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसबाट भइरहेका निर्णय संयुक्त सरकारको आचारसंहिता र सहकार्य संस्कृत..
किन हाँस्ने, कसरी हाँस्ने र हाँस्दाका फाइदा के छन् ?
हाँसोले विज्ञानकै दर्जा पाएको छ । हाँसोको विज्ञानलाई गेलोटोलजी भनिन्छ । हाँसोले शरीर र मनमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने विज्ञान नै गेलोटोलजी हो । तर, हाम्रो समाजमा हाँसोलाई त्यति महत्त्व पनि दिइँदैन । हाम्रोमा परम्परागत रुपमा नै ‘हाँस्यो कि नास्यो’ भन्ने अवधारणा पनि छ । हाम्रोमा गम्भीर प्रकृतिका मानिस वा भद्रभलादमीहरू खासै हा..
आमालाई खुसी बनाउन आमाकै विरुद्ध मुद्दा हालें
धेरै वर्षअघि तुमलिङटारमा जहाज दुर्घटना भएको थियो, ठ्याक्कै मिति बिर्सें । त्यतिबेला थुप्रैले ज्यान गुमाएका थिए । ज्यान गुमाउनेमा आमा र बच्चा पनि थिए । यसबारे मैले समाचार पढेको हुँ । आमाले बच्चालाई बेसरी छातीमा टाँसेकी रहिछन् । बच्चाको छाती आमाको छातीमा टाँसिएको रहेछ । दुवैको शरीर र कपडा जलेको थियो रे । तर, शव […]
लिपुलेकको ग्राउन्ड जिरोमा पुग्दा विद्यार्थी नेता विरेन्द्र बस्नेतले के-के देखे ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा गएको बेला गत १५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकसमेत तीनवटा नाकालाई व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विकसित गर्ने गरि सम्झौता भयो । लिपुलेक नेपाली भूमि हो, तर सम्झौता भारत र चीनवीच मात्र भयो । यो सम्झौता सच्चाउन सरकारले कुटनीतिक पहल गरेको बताएपनि नतिजा केही देखिएको छैन । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र तिन..
थाई बक्सिङको रिङमा जमेका गोर्खाली
थाइल्यान्ड, – ‘इतिहास जित्नेको लेखिन्छ’ भनेझैँ बारबार जितेर थाइ बक्सिङमा आफ्नो इतिहास लेखाउने अभियानमा छन्, उमेशकुमार श्रेष्ठ । पर्वतको वास गाविसस्थित पैँयुखोलामा जन्मेका उमेशले त्यतैबाट एसएलसी पास गरे । एलएलसी सकिनासाथ समयले उनलाई मलेसिया पुर्यायो । मलेसियाबाट प्लस टु लेभलको शिक्षा पूरा गरेसँगै उनले सिंगापुरको टिकट काटे ।..
किन चुपचाप जारी गरियो दीर्घकालीन कृषिविकास रणनीति ?
सरकारले देशको कृषि क्षेत्रको मार्गचित्र कोर्ने कृषि विकास रणनीति चुपचाप जारी गरेको छ । सन् २०१५ देखि २०३५ सम्मका लागि बनाइएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति कुनै औपचारिक कार्यक्रम नै नगरी जारी गरी वेभसाइटमा राखिएको हो । देशको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय चुपचाप जारी गरिनुमा सरकारका तर्फबाट केही ..
एजेन्टले कामदार थर्काउँछन्, कामदारले गुन्डा लाउँछन्, नेता धाउँछन् !
पहिले मेनपावर अफिसमा जागिर खान्थेँ । ०६४ सालदेखि भने आफैंले अफिस खोलेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरु गरेँ । अर्को व्यक्ति सञ्चालक भएको ठाउँमा जागिर खाँदा रेस्पोन्सिबिलिटी निकै थोरै हुनेरहेछ । आफैं सञ्चालक हुँदा सबै जिम्मेवारी आफ्नो हुन्छ, अझ बढी सेन्सेटिभ र सिरियस भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आठ वर्षको दौरानमा करिब चार हजार युवा ..
ती कमला पन्त यी गरिमा पन्त
मेरो बुझाइमा सिनेमा समाजको दस्तावेज हो । सिनेमाले समाज देखाउँछ । समाजका संस्कृति, विकृति, प्रवृत्ति नै सिनेमामा आउने हो । विकसित मुलुकमा यन्त्र, काल्पनिक जीव, दुनियाँमाथि फिल्म नबनाइने होइनन् । तर, आखिर जति कल्पना गरे पनि समाज, जीव वा जीवनभन्दा परको कल्पना त हुँदैन । त्यसैले सिनेमाले समाजलाई दृश्यमा देखाउँछ, स्पष्ट भाषामा समाज ब..
एउटी आमा जसले पात गाँसेर हरिवंशलाई हुर्काइन्
आमाबारे कतै पढ्न पाएको थिएँ । रसियामा भूकम्प गएछ । भूकम्पले घर भत्केर आमा र बच्चा पुरिएछन् । बच्चा बाँचेछ, आमा मरिछन् । बच्चा कसरी बाँचेछ भन्देखिन्– पुरिएको ठाउँमा हात चलाउन मिल्दो रैछ, बच्चालाई आमाले काखमा लिएकी रहिछन्, बच्चाले भोक लाग्यो भन्दो रैछ, आमाले आफ्नो हातको औँला टोकेर बच्चालाई रगत चुसाउँदी रैछन् । यसो गर्दागर्दै [&hel..